Indlela yokukhetha imonitha yoyilo lwegraphic | Abadali be-Intanethi
Indlela yokukhetha imonitha yoyilo lwegraphic
Xa uzinikela kuyilo lwegraphic, uyazi ukuba kungekudala okanye kamva kuya kufuneka ukuba ukhuphe imali oyizuzayo ukwenza utyalo-mali. Oku kunokuthengwa kweenkqubo zokuhlela umfanekiso okanye i-hardware (ikhompyutheni, ikhibhodi, ithebhulethi ...). Kodwa ngaba uyayazi indlela yokukhetha imonitha yoyilo lwegraphic?
Ngokwenyani kukho imiba ebalulekileyo ongafanele ungayihoyi ukukhetha eyona ilungileyo ngokusekwe kumsebenzi kunye neemfuno zakho. Sithetha ngayo yonke le nto ngezantsi.
1 Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo zabahloli boyilo lwegraphic
1.1 uyilo esweni
1.2 iimpawu ezininzi kakhulu
1.3 Ixesha lokuphendula
2 Kufuneka ujonge ntoni xa ukhetha imonitha yoyilo lwegraphic
2.1 jonga ubungakanani
2.2 Isisombululo sescreen
2.3 Umyinge wezinto
2.4 Iphaneli yokubonisa
2.5 Igreyscale kunye nemibala
Izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo zabahloli boyilo lwegraphic
Ukuba ne-monitor kuyilo lwegraphic, kukodwa, kuyinzuzo enkulu. Kwaye kungenxa yokuba yenzelwe ukubonelela zonke iimfuno ezinokuthi ingcali ifune ukwenza umsebenzi wayo. Kodwa ngaphandle kweenzuzo ezinika zona, kukwakho nezinto ezininzi ezingeloncedo ekufuneka ziqwalaselwe.
Ingcebiso yethu kukuba ulinganise okulungileyo kunye nokubi kwemonitha enezi mpawu ukuze wazi ukuba kufanelekile okanye akunjalo.
Phakathi kwezinto eziphazamisayo oya kuzifumana zezi:
Sithetha ngendlela eyilwe ngayo iliso. Ngamanye amaxesha, ukujonga imbonakalo yomzimba ayisiyiyo eyona nto ingcono, kodwa iinkcukacha zobugcisa zangaphakathi. Musa ukoyika ukuba nemonitha embi, emva kwayo yonke loo nto, ayisiyiyo into eza kukunceda wenze umsebenzi wakho, kodwa iimpawu zayo.
iimpawu ezininzi kakhulu
Kuthekani ukuba izithethi, ukuba izibuko USB, ukuba TV tuner ... Ngaba ngenene ucinga ukuba uza kufuneka yonke loo nto?
Ngamanye amaxesha yonke le nto iyenzayo yenzakalisa imonitha yoyilo lwegraphic. Yiya kwizinto ezilula, kwaye, ngaphezu kwakho konke, ukuhlangabezana neemfuno ezincinci zokukhetha iliso kulo msebenzi.
Enye yeempawu abazama ukusithengisa xa sifuna ukuthenga imonitha yoyilo lwegraphic lixesha lokuphendula. Banokukuxelela ukuba ikhawuleza kakhulu, ukuba ayithathi ixesha elide ... Kodwa, ngaba oko kubalulekile kuyilo lwegraphic? Hayi kakhulu.
Ixesha lokuphendula libhekisa ekubeni kuthatha ixesha elingakanani ukubonisa into kwiscreen. Umzekelo, ukuba uyicela ukuba iqhube inkqubo kwaye ithatha ixesha elingaphezulu okanye elincinci ukuyibonisa.
Ngokucacileyo, asikuxeleli ukuba uza kukhetha enye ethatha ixesha elide, kodwa akuyomfuneko ukuba inesantya esigqithisileyo (njengoko kunokuba yimfuneko kwimeko yokudlala).
Ngaba ucinga ukuba elona liso lilungileyo loyilo lwegraphic kufuneka libe lelona xabiso liphezulu? Ayinakuba kude enyanisweni. Kuyinyani ukuba kukho ezibiza kakhulu, kodwa akunyanzelekanga ukuba zibengcono kunezo uzifumene kuluhlu oluphakathi okanye olusezantsi.
Kule meko, kuya kufuneka ulawule ngokubeka phambili izinto ozifuna kakhulu kwaye, ke, uthenge imonitha ekunika loo nto ikumgangatho ophezulu ngelixa ezinye zihlala kwinqanaba elamkelekileyo.
Kufuneka ujonge ntoni xa ukhetha imonitha yoyilo lwegraphic
Ukuba ucinga ukukhetha imonitha yoyilo lwegraphic, apha sabelana ngezitshixo zokwenza ukhetho lwakho lube yimpumelelo kangangoko sinakho. Oku akuthethi ukuba kufuneka ube nazo zonke ezikumgangatho ophezulu, kuba kuya kufuneka ubeke phambili ngokusekwe kumsebenzi owenzayo.
Abanye bathi imele ukuba inkulu kakhulu. Noko ke, abanye bacinga ukuba ayibalulekanga kangako. Kodwa inyaniso ikukuba sikugqala njengento ebalulekileyo. Uyabona, xa usebenza ngemifanekiso enesisombululo esiphezulu, esineenkcukacha ezininzi, ukuba ne-monitor elungileyo, enkulu ingcono kakhulu kunencinci.
Ngokucacileyo, yonke into iya kuxhomekeka kwindawo onayo kwidesika, nokuba kusemsebenzini okanye kwiofisi yakho. Kodwa ngokuqhelekileyo xa iimonitha zinobungakanani obuqhelekileyo, ekugqibeleni ugqiba ezimbini okanye ezintathu ukuze ube nendawo efunekayo.
Yaye zinokuba yintoni ezo? Zama ukuyenza imonitha ubuncinci i-intshi ezingama-29 kwaye iphantse ibengcono kwi-ultrawide kune-square (oko kukuthi, uxande) kuba, nangona unokucinga ukuba iyalwandisa uyilo, inyani yeyokuba ibonakala ingcono kakhulu.
Kakade ke, kufuneka uthathele ingqalelo eminye imiba ebalulekileyo.
Ngenxa yokuba une-monitor enkulu ayithethi ukuba unesisombululo esikhulu. Ngamanye amaxesha yenye yeempazamo onazo.
Kwimeko yakho, njengomyili wegraphic, uya kudinga imonitha ukuba ikubonise imifanekiso ebukhali ethembeke ngokwenyani kangangoko kunokwenzeka. Kwaye nangona umbala ungena apho, umthamo wesisombululo sesikrini ubaluleke kakhulu.
Yeyiphi eyona ilungileyo? Kithina kufuneka ubuncinci ube neepikseli ezingama-2560 × 1440. Okuphezulu kunoko kungcono nangakumbi.
Ngoku, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iinkqubo ozisebenzisayo zilungiselelwe eso sigqibo kuba ukuba akunjalo, ekugqibeleni uya kuchitha ngaphezulu kwinto ongayi kukwazi ukuyisebenzisa.
Ngokunxulumene nazo zonke ezi zinto zingasentla, i-aspect ratio inento yokwenza nobukhulu bemonitha. Ngokuqhelekileyo siyazi i-4: 3, efana ne-square, eyi-monitor eqhelekileyo (kunye neyokuqala ephumayo). Ngoku, kukho no-16:9, eluxande ngakumbi kwaye inikezela ngobude obufanayo kodwa imalunga neskweri sesikrini esinye nesiqingatha.
Kwaye okokugqibela, ezona zangoku ziyi-21:9, ezibanzi kakhulu kwaye zijongeka njengezikrini ezibini zesikwere ezidityanisiweyo. Bakunika umbono ngakumbi kwaye bakuvumela ukuba wahlule isikrini ngokweemfuno onazo.
Lo ngumba obaluleke kakhulu kwaye apho kufuneka unikele ingqalelo kumagama amathathu: TN, VA kunye ne-IPS.
I-TN yeyona nto yaziwa kakhulu, kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba, kuyilo lwegraphic, lolona lubi kakhulu. Kwaye kungenxa yokuba ayikubonisi imibala njengoko injalo ngokwenene. Kwakhona, ineengile zokujonga ezimbi kakhulu.
VA linyathelo ukusuka TN. Kule meko unamaxesha okuphendula okulungileyo (kungcono kune-TN kunye ne-IPS) kunye nemibala ebukhali, nangona ingabonakali.
IPS yinto oya kuyifumana kuluhlu oluphakathi kunye noluphezulu. Yeyona ibiza kakhulu, kodwa imibala ithembekile. Ewe kunjalo, inamaxesha asezantsi okuphendula kwaye ngamanye amaxesha inika ukuvuza okukhanyayo (kodwa isonjululwa ngokusebenza kwiindawo ezikhanyisiweyo).
Igreyscale kunye nemibala
Njengoko besikuxelela, kubaluleke kakhulu ukuba eyona mibala ithembekileyo iboniswe kwimonitha. Ke ngoko, ezona zibalaseleyo zii-IPS kuba zigubungela i-sRGB okanye i-Adobe RGB yebala lombala. Abanye, njenge-VA, ababi, kuba baphantse bathembeke, kodwa ii-TNs zibi kakhulu.
Ngaba ngoku icacile kuwe indlela yokukhetha imonitha yoyilo lwegraphic?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Indlela yokukhetha imonitha yoyilo lwegraphic
Iibhrashi ezingcono zokuvelisa